Indlela yokunciphisa ubungakanani befayile ye-dgn / dwg -Geofumadas
NgoJulayi, 2010 AutoCAD-AutoDesk, Microstation-Bentley
Kwenzeka ukuba ukuba sinayo ifayile enolwazi oluninzi, umzekelo umgqomo kunye ne-70 iziqendu (Amanqanaba) kwaye ngomzuzu othile sikwahlulahlula ngokususa amanqanaba athile ukuze siwabeke kolunye uluhlu, ifayile yoqobo isenobukhulu obulinganayo. Singashenxisa yonke idatha kwaye ihlala ifana, nangona ingenayo imbali eyenziweyo.
Kule meko, ndinemephu eyayinayo phantse yonke ingcaciso kamasipala, ilinganisa i-17 MB. Ndicime phantse yonke into kodwa isalinganisa ubungakanani obulinganayo.
Kukho abo benzayo ukuvula ifayile entsha, ukubiza umnxeba weemaphu uze uyikopishe Ucingo okanye ukuthumela ngayo Ifayile yeFence. Ukungonakali kwile ndlela kukuba unokulahlekelwa zembali Xa uthe wawusebenzisa, ungaphinde ulahlekelwe izinto eziye zacwangciswa kwifayili nge izicwangciso / ifayile yokuyila.
Ngoko indlela eyona ndlela kukunika i-purgative, eli gama laqulunqwa ngabanye abahlobo kwikhosi kuba le nkqubo kwi-AutoCAD ibizwa Phumla.
Ukwenza oko, kwenziwa File / compress. Kukhetho iinketho isetyenziswe ukuba isuswe, equka amanqanaba angasetyenziswayo, izitayela zomgca, izitayela zetekisi, iibhloko (iiseli), njalo njalo.
Xa sele ukhethwe, kusetyenziswa Cindezela kunye ne-voila, ifayile yam eyi-17MB yehla yaya kwi-1MB nje. Uye wacima ezinye izinto ezinje ngesiporho ezibonakalayo kwimephu kodwa azinakuchukunyiswa.
Kuyakwazi ukumisela kuyo Indawo yokuSebenza / ukulungiselela, kwaye ukhetho umsebenzi, ukwenzela ukuba xa ushiya i-Microstation, ucindezela ifayile.
Ifayile> Izixhobo zokudweba> Ukucoca
Nalu ukhetho lwebhonasi, olubonisa izinto ezingenakucocwa, kwaye unike isizathu sokuba kutheni. Ukuzikhetha kuya kufuneka usebenzise iqhosha le-Ctrl.
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-Microstation Geographics: Incwadi yenkcazelo
Post Next Egeomates, iifoto kuphelaOkulandelayo »
Impendulo enye kwi "Indlela yokunciphisa ubungakanani befayile ye-dgn / dwg"
kwinguqulo ye2016 ingaba njani?